Nhau - Maitiro Ekuboora Mvura Zvinoenderana Nenzvimbo
Maitiro Ekuchera Kwemvura Zvinoenderana Neiyo Terrain
Kune avhareji yematsime anodzika, kuchera kwechitubu chemvura yekuchera haisi chinhu kunze kwekukurumidza kutsvaga chinzvimbo chekuchera huwandu hwakawanda hwemvura. Kana paine ruzivo rwakakwana, zvinokwanisika kuti tsime racho rigocherwa pasina mvura.
Saka ungawana sei mvura zvinoenderana nehunhu hwenzvimbo?
1. "Tora ivhu uye uwane mvura ndiyo inobatsira zvikuru." Mvura yepasi pamativi matatu yakakomberedzwa nemakomo, mvura yepasi inoyerera ichienda kune yepasi pemvura yepasi zvakanyanya, saka apo tsime parinocherwa padyo nemvura yepasi pemvura yepasi, pane mvura yakawanda.
2. "Kune gomba pakati pemakomo maviri, uye pane kuyerera kwemvura mudombo remugodhi." Kune mupata pakati pemakomo maviri aya, uye zviri nyore kuwana matsime emvura mumatombo ematombo ese ari maviri ezasi ezasi emupata werwizi.
3. "Makoronga maviri anopindana uye mvura yematsime inomhanya." Panogona kuve nemvura yematsime pasi pemuromo wegomo panosangana migero miviri. Kana ukachera tsime pano, tsime remvura rakavimbika.
4. "Shanzui vs. Shanzui, pane mvura yakanaka pasi pemuromo". Iwo mapani maviri akatarisana uye ari padhuze nepadhuze. Nzvimbo iri pasi pemapini maviri yakati sandara. Zviri nyore kuchera mvura kana uchichera matsime pakiyi.
5. "Makomo maviri uye rimwe gomo rinowanzooma." Kana dombo rakatsemuka pasi peGushan rikava mvura-proof layer nekuda kwekusiyana kwenzvimbo, uye inogona kudzora kuyerera kwemvura yepasi, uye nekuchera tsime kumusoro kweGushan, mvura inogona kuburitswa.
6. "Miromo miviri inobata muromo mumwe, pane mvura yematsime pazasi". Makomo emativi ese ari maviri akareba uye kune gomo pfupi riri pakati. Pamuromo pegomo repakati, kana paine dura rinokwenenzverwa pamusoro uye rakapetwa risingapindike pazasi, matsime anogona kugadzirwa nekuchera matsime munzvimbo dzakaderera.
7. "Makomo akaderera, uye huwandu hwemvura yematsime hwakakura pakuchera matsime." Makomo acho akabatana kusvika pari zvino zvekuti akanyudzwa, uye mvura yepasi inogona kuwanikwa muafififiya umo matopu ekumugumo akanyudzwa akakodzera.
8. "Gomo rinotenderedza musoro waro uye pane mvura". Nzvimbo yakadzika yegomo bay inokonzerwa nekumonyaniswa kwegomo ichivhara mvura yepasi ichiyerera ichidzika negomo, ichifumisa mu aquifer, uye mune mvura mutsime.
9. "Convex gomo kusvika concave gomo, mvura yakanaka iri mukamuri rekongono". Chimiro cheimwe gomo chinotenderera kuenda kune rimwe divi, uye chimiro cheimwe gomo chiri concave mukati. Iyo convex uye concave zvakanangana zvakanangana. Tsime remvura rakanaka muchikamu chezasi chegomo rakasangana, uye huwandu hwemvura yekuchera matsime hwakakura.
10. "Gomo guru rinoputika kubva mudhishi, uye mune mvura zhinji mutsime." Gomo rakapfupika rinobuda pakati peGomo reChangshan. Kuchera matsime muzasi kweruwere rwegomo iri Tsui inowanzo gadzira mvura.
11. "Bay to bay, mvura haina kuoma". Iwo maviri emakomo mabhesi akatarisana akatarisana, uye mafashama kana akanaka mvura zvirimwa zvinowanikwa pakati peiyo bay, kunova kuratidzwa kwemashure emvura mumakomo. Matsime anocherwa pano uye kune matsime akanaka.
12. "Junction yemakomo maviri, pane kuyerera kwematsutso". Kazhinji, pane kushayikwa kwemvura inoyerera pakati pemakomo. Mwaka wemvura unogona kubuditsa mvura pajoini, uye mvura yepasi munguva yakaoma inogona kubuda sechitubu pamubatanidzwa.
13. "Kune matombo mazhinji pabani remafashama, uye kukwira pasi pevhu kwakafanana nerwizi rwakasviba." Kunyangwe nzizi dzaoma munguva yechando, kune kuyerera kwekudonha pasi pemafashama emvura, ayo anogona kukamura nekuchengetedza mvura nekuchera matsime ekuchera mvura.
14. Tarisa nzira dzakare dzenzizi dziri parwizi. Kunyangwe mugero werwizi rwekare wakavigwa ikozvino, iyo aquifer igiravhu, uye kuchine kuyerera kwekudonha, inova nzvimbo yakanaka yekuchera matsime.
6 Dth Nyundo, Dth Nyundo Bit Mutengo, Dhiziri Mhepo Compressor, Rori Yakakwira Mvura Tsime Kuchera Rig, Hydraulic Mvura Tsime Kuchera Rig, Mvura Well Drilling Rig Machine,